RIKOODHADII cajiibka ahaa ee laga diiwaan geliyey kulankii Chelsea ay Man City ku xasuuqday Etihad… (Man City oo noqotay kooxdii ugu horreysay ee…) – Gool FM
(Manchester) 04 Dis 2016 – Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa guul soo laabasho ah garoonka Etihad oo ay booqatay kaga soo gaartay Manchester City, waxaana ay hoggaanka u dheereysatay horyaalka Premier League, iyadoo labo kaas oo casaas ah loo taagay Man City dhammaadkii kulankan.
Chelsea ayaa goolka iska dhalisay qeybtii hore, laakiin qeybtii labaad saddex gool oo ay kala dhaliyeen Diego Costa, Willian iyo Hazard ayey Blues garoonka Etihad guul wayn kaga soo gaartay Man City.
Daqiiqadihii lagu daray ciyaarta oo ahaa 6’daqiiqo intii lagu guda jiray Sergio Aguero ayaa qalad xun ku galay David Luiz, sidaasna ku muteystay kaarka cas, laakiin qalalaaso ayaa halkaas ka bilowday, iyadoo Fernandinho uu dagaal gacan ka hadal ah siiyey Cesc Fabregas, sidaasna garoonkoonka looga saaray wiilka reer Brazil.
>- Manchester City ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay ee loo taago labo kaar cas ah hal kulan oo Premier League ah gudihiis xilli ciyaareedkan.
>- Chelsea ayaa laga dhaliyey gool iyadoo ku ciyaaraysay meel ka baxsan garoonkeeda horyaalka Premier League, kaddib 365 daqiiqo oo aan gool laga dhalin iyagoo marti ah, tan iyo bishii September markaasoo ay Arsenal ka soo dhalisay, ogowna goolkaas kabtankooda Cahil ayaa Blues ka dhaliyey kulankan.
>- Waa markii ugu horreysay oo ay Man City guuldarro ku soo gaarto kulan horyaalka ah garoonkeeda iyagoo ciyaarta gool ku hoggaaminaya, tan iyo bishii April sanadkii 2009, markaasoo inta gool la hormareen ay kooxda Fulham saddex gool ugu bedeshay ciyaar ku dhammaatay (1-3).
>- Chelsea ayaa wada dhalisay mid kasta oo ka mid ah saddexdii shuut bartilmaameed ee ugu horreeyey oo ay tuureen kulankan ay ka horjeedeen Manchester City.
>-Tan iyo kulamadii Boxing Day sanadkii 2015, Diego Costa ayaa gacan ka geystay 30 gool 28 kulan oo uu Premier League ciyaartay, waxa uu dhaliyey 20 gool tan iyo markaas, isagoo caawiyey 10 gool oo kale.
>- Diego Costa ayaa hadda gool kaga dhaliyey Premier League 20 kooxood oo kala duwan, kaddib markii uu tartankan kaga hortagay 23 kooxood.
>- Diego Costa ayaa loo diiwaan geliyey shan gool caawin horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, mana jiro weeraryahan ka badan caawinta Costa uu xilli ciyaareedkan ka sameeyey Premier League.
>- Manchester City ayaan shabaqeeda gool ka ilaashatay hal jeer oo qura 15-kii kulan ee ugu dambeeyey oo ciyaartay tartammada oo dhan.
>- Chelsea ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay ee horyaalka Premier League 3 gool kaga dhalisa dhinaca Pep Guardiola ee Man City.
SERIE A: JUV VS ATA 3-1...Kooxda Juve oo bajisay bacdii Atalanta kuna soo laabatay jidkii guusha + Sawirro
Kooxaha Juve & Atalanta oo si la yaab leh ugu baroor diiqay Chapecoense + Sawirro